လောဘကြီးပြီး လူတိုင်း အပေါ် ကလိန် ကျမှု ကြောင့် မကြာခင် ပြိုဆင်း တော့ မယ့် မဟာတံတိုင်းကြီး – Na Pann San
လွန်လေ ပီးသော နောင်တ လက်တွေ့ကျမှ သိကြ ပီပေါ့… ပြောလိုက်တဲ့ စကား အရှက်တရား ဆိုတာ ဘယ်မှာ ရှာရမှ န်းမသိ…တောင်းပန်တာတောင် မှ အသားယူပြောတ တ်တဲ့ လူစား မျိူးတွေဘဲ….
ဘာတဲ့. မိမိနိူင်ငံဟာ သူတပါးအပေါ်တစ်လက်မမှကျူးကျော်ခြင်းမရှိပါဘူး….နိူင်ငံကြီးပီပီ စောင့်ထိန်း ရမဲ့ ဥပဒေ ကို တိတိကျကျ.လိုက်နာဆောင်ရွက်နေပီး အရိုးသားဆုံး ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွှက်နေတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဦးဆုံးနိူင်ငံဖြစ် တယ် ဆို ပါလား….
အမေရိကန်နိူင်ငံနှင့် ဘယ်လို အကြောင်းအရာ မဆိုဆွေးနွေး ညှိနိူင်း ပီးတော့ လုပ်ဆောင်မဲ့နိူင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပီး.စားပွဲဝိုင်းမှာအ​ဖြေရှာလို့ရတဲ့ ကိစ္စရပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပီးပြောလာတဲ့ နဂါးကြီး ဆို ပါတော့…
ဒဲ့သာပြောလိုက် ပါကွာ.စစ်မတိုက်ပါနှင့် ခင်ဗျားတို့ လိုချင်တာအကုန်လုံး လိုက်လျောပါ့မယ် လို့.ကျူပ်တို့ အစိုးရကိုဘဲ တရုတ်နိူင်ငံ မှာထားခဲ့ပေးပါဆိုပီးတော့
ဆရာ တပည့်တွေတစ်လေသံဘဲထွှက်ကြ တယ်ဆိုတာ ခုတော့သိလိုက် ရပါ့…လက်စသတ်တော့ ဆရာနောက်ကို တစ်ထေရာတည်းလိုက်နေကြတာကိုး….(ဒါကတော့ဘ ယ်သူတွေ ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်)
ကမ္ဘာကိုပတ်.စီးပွားမြတ်ရင် ပီးရောဆိုတဲ့လောဘ..အတ္တ အမှောင်ဖုံးကျဆုံးချိန်တန်ခဲ့ပီပေါ့.ရသမျှ အကုန်ယူ.ဇတ်တူတောင်မချန်ဘူး….ကြီးလိုက်တဲ့လောဘ.တစ်ကမ္ဘာလုံး မကသိမ်းချင်…. ဟန်ရေးတပြင်ပြင်.ချဲ့ထွင်လာခဲ့ တာကြာပီပေါ့…ခံလိုက်ရတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီး.ခံလိုက်ရတဲ့လူသားတွှေ.အငြိုးပြေကြပါတော့မလား…စိတ်ထဲမှာ ထင်တိုင်းကြဲ.အာဏာစွဲ ကရှိနေတာ ကိုးဗျ.
မတရားတာ ကိုမသိ.ငါမှာရှိရင် ပီးရောဆိုတဲ့တစ်ဘို့ တည်းသမား..ခုတော့.အကြောက်တရား.ရှေ့ရောက်နေပီလား ဆိုမှသိကြတဲ့နောင်တတွေ….အဲဒါကိုပြော တာပေါ့.သူတပါး ကိုကျတော့သေချင်သေ.ဆိုးချင်ဆိုး.ငါသက်ဆိုးရှည် ဖို့ဘဲလိုတယ် ဆိုတဲ့လူစားမျိူးတွေဘဲ…
ကမ္ဘာအလယ် စောက်ရှက်ပြေပြောလိုက် တာကတော့ဒေါသကိုနိူးဆွှလိုက် သလိုပါဘဲ.ကိုယ်ပြောတဲ့စကားလက်ခံမလားဆို တာတောင်.မသိကြတဲ့အာဏာရှင်တွေ.တောင်းပန် တာတောင် ကလိန်ကကျစ်ကကြလိုက်ရ မှ….
လူတကာနားထဲ ရီစရာသွားပေး သလိုဖြစ်နေပါ့ဗျာ….ရိုးသားတဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကပထမဆုံးနိူင်ငံဆိုပါလား……
ထရမ့်ကတော့ မင်းပြောတဲ့စကားတွေက ငါကိုဘဲ မရိုးသားတဲ့နိူင်ငံ လိုလိုစောင်းကာ အော်နေတာလားဟ ဆိုပီးပိုလို့ဒေါသနိူးဆွှပေးလိုက်တာအတူတူပါဘဲ…. ခုတော့အချိန်နှောင်းခဲ့ ပီ ဆိုပါတော့.ရပ်တည်နိူင်ရေး တရုတ်တစ်ပြည်လုံးပေးရင်တောင်ကျေနပ်ကြမှာ မဟုတ်ဘူးအကြောင်းကိုသိ.ခံလာရအကြိမ်ကြိမ်ရှိခဲ့ကြပီဆိုတော့လေ…
ထိုင်ဝမ်.ဂျပန်.ဘယ်တော့မပြန်တဲ့လူစားမျိူးတွေ.ယတိပြတ်အဆုံးသတ်ဖို့ထိလာနေကြတာ.လင်းယုန်ကြီးရဲ့သခင်ထရမ့်ပြင်ဆင်နေတာလည်း.ဝက်ဝက်ကွဲစစ်ရေးကိုအင်အားတိုးထားတာ….စစ်တစ်လင်းပြေးဆင်းရမဲ့အချိန်ထိဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားကြမှာပါ….ဘယ်လောက် ထိကြံ့ကြံခံပီးနိူင်ငံထဲနေနိူင်မှာလဲ.အဖြေ ကိုသိပီးသားဖြစ်တဲ့အတွှက်ခုတော့ တရုတ်နဂါးဖွှတ်ကျားအဆင့်ထိဖြစ်နေပီ….
အပြင်ကို ထွှက်မရ.အငတ်ဘေးကြုံနေရတဲ့ပြည်သူ.ဘယ်ထိ မဆူဘဲနေနိူင်မလဲဘယ်နေ့လာ တိုက်မလဲ.ဘယ်နေ့လာချမလဲ ဆိုပီး.ကြောက်နေရတဲ့.ဘဝကိုခံစားသိရှိကြပီ မဟုတ်လား… သူတပါးကိုမတရားလုပ်အနိူင်ကျင့်ဘိုကျတဲ့လူမှန်သမျှလောကတရားကြီးကကြည့်မနေပါဘူး..အတုန့်အပြန်ပိုခက်ထန်စွာလာစမြဲဆိုတာသိကြတော့ပေါ့…
လေးဘက်လေးတန်ဝိုင်းရံထားတဲ့ စစ်မဟာ.အင်အား တိုးလာ တာမြင်တော့ကြောက်ပါပီ လို့မပြောရုံတစ်မယ်သိက္ခာလေး ဆယ်နေရတယ်..ပြောလာပြန်တော့ တစ်လွဲ.ဒေါသပေးနေသလားမှတ်ရတယ်..(ဟုတ်ပါ့)နားထောင်ရတဲ့ သူမှန်သမျှဒေါသထကုန်ကြတာ ဘဲလေ…
အင်းလေ.ကမ္ဘာကြီးလည်းငြိမ်းချမ်း ချင်ပီထင်ပါ ရဲ့.မတရားမူ့ကို ဖယ်ထုတ်တဖြည်းဖြည်းသုတ်သင်လာတာ သတိမထားမိလို့နေပါ လိမ့်မယ် ။ရှေ့တိုးမရနောက် ဆုတ်မရ.အခက် တွေ့နေကြ.အချိန်မှီခင်ပြုပြင် ရခဲ့တဲ့အရာတွေဆိုပါတော့.ခုတော့လွန်လေသည့် အမှားနောင်တ.တရားဘဲရှိတော့တယ်
မကြာခင်နေဝင်တော့ မည်.မဟာတံတိုင်းကြီးလည်းပြိုကျမြေခရတော့ မည်….အားသွန်ခွန်စိုက်တစ်ချက် မိုက်တာနှင့်လည်းဗုံးမိုးတွေရွှာချ.ဇတ်သိမ်း မလှဖြစ်တော့မည်….သံဝေဂတရား ဆုတ် ကိုင်ထားကြပေတော့ ..နောင်လာနောက်သားပြော စကားတောင်ကျန်ပါ့မလား..ထရမ့်ကြီးကတော့ ကမ္ဘာသမိုင်း.ဖတ်စာတိုင်းမှာ ပါလာကောင်း ပါရဲ့….
အဲဒါဘာလဲဆိုတော့.အာဏာရှိစဉ်လူလိုမမြင်ခဲ့တဲ့အကျိူးတရားခံစားကြရတာဘဲလေ…ချစ်ခြင်းမေတ္တာ. သနားငဲ့ညှာစိတ် ဆိုတာလူတိုင်းမှာသာရှိကြရင် ဘယ်စစ်ပွဲမှဖြစ်လာစရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး..
မတရားမူ့ကို မတုန့်ပြန်.သည်းခံနိူင်တဲ့ အတိုင်းအတာထိတော့ခံနေခဲ့ကြသေးတာ ဘဲ..ခုကတော့.အနိစ္စသဘော.ကိစ္စလျှောတော့မယ် ဆိုပါတော့….လောဘ.အတ္တ.မာန. ဒေါသတရားဖုံးလွမ်းသွား ခဲ့ရင်.အမှန်မမြင်ပြုပြင်လို့မရတဲ့အကြောင်းတရားပိုလို့များပြားလာတာအမှန်ပါလေ..
တစ်ချိန်က မဟာတံတိုင်းကြီး.ခုတော့ပြိုဆင်း.မြေတလင်းပေါ်ရောက်ခါနီးပီပေါ့မကြာမှီ.အတောင်ပံများ စွာ.လင်းယုန်ကြီးဟာ ပျံသန်းပြပါ လိမ့်မယ်ဆိုတာ ကို မယုံမရှိလေနှင့်…
လှနျလေ ပီးသော နောငျတ လကျတှကေ့မြှ သိကွ ပီပေါ့… ပွောလိုကျတဲ့ စကား အရှကျတရား ဆိုတာ ဘယျမှာ ရှာရမှ နျးမသိ…တောငျးပနျတာတောငျ မှ အသားယူပွောတ တျတဲ့ လူစား မြိူးတှဘေဲ….
ဘာတဲ့. မိမိနိူငျငံဟာ သူတပါးအပျေါတဈလကျမမှကြူးကြျောခွငျးမရှိပါဘူး….နိူငျငံကွီးပီပီ စောငျ့ထိနျး ရမဲ့ ဥပဒေ ကို တိတိကကြ.လိုကျနာဆောငျရှကျနပေီး အရိုးသားဆုံး ပှငျ့ပှငျ့ လငျးလငျး လုပျကိုငျ ဆောငျရှကျနတေဲ့ ကမ်ဘာပျေါမှာ ပထမဦးဆုံးနိူငျငံဖွဈ တယျ ဆို ပါလား….
အမရေိကနျနိူငျငံနှငျ့ ဘယျလို အကွောငျးအရာ မဆိုဆှေးနှေး ညှိနိူငျး ပီးတော့ လုပျဆောငျမဲ့နိူငျငံတဈခုဖွဈပီး.စားပှဲဝိုငျးမှာအဖွရှောလို့ရတဲ့ ကိစ်စရပျဖွဈတယျဆိုပီးပွောလာတဲ့ နဂါးကွီး ဆို ပါတော့…
ဒဲ့သာပွောလိုကျ ပါကှာ.စဈမတိုကျပါနှငျ့ ခငျဗြားတို့လိုခငျြတာအကုနျလုံး လိုကျလြောပါ့မယျ လို့.ကြူပျတို့အစိုးရကိုဘဲ တရုတျနိူငျငံ မှာထားခဲ့ပေးပါဆိုပီးတော့
ဆရာ တပညျ့တှတေဈလသေံဘဲထှကျကွ တယျဆိုတာ ခုတော့သိလိုကျ ရပါ့…လကျစသတျတော့ ဆရာနောကျကို တဈထရောတညျးလိုကျနကွေတာကိုး….(ဒါကတော့ဘ ယျသူတှေ ဆိုတာ လူတိုငျးသိပါတယျ)
ကမ်ဘာကိုပတျ.စီးပှားမွတျရငျ ပီးရောဆိုတဲ့လောဘ..အတ်တ အမှောငျဖုံးကဆြုံးခြိနျတနျခဲ့ပီပေါ့.ရသမြှ အကုနျယူ.ဇတျတူတောငျမခနျြဘူး….ကွီးလိုကျတဲ့လောဘ.တဈကမ်ဘာလုံး မကသိမျးခငျြ…. ဟနျရေးတပွငျပွငျ.ခြဲ့ထှငျလာခဲ့ တာကွာပီပေါ့…ခံလိုကျရတဲ့ ကမ်ဘာမွကွေီး.ခံလိုကျရတဲ့လူသားတှေ.အငွိုးပွကွေပါတော့မလား…စိတျထဲမှာ ထငျတိုငျးကွဲ.အာဏာစှဲ ကရှိနတော ကိုးဗြ.
မတရားတာ ကိုမသိ.ငါမှာရှိရငျ ပီးရောဆိုတဲ့တဈဘို့တညျးသမား..ခုတော့.အကွောကျတရား.ရှရေ့ောကျနပေီလား ဆိုမှသိကွတဲ့နောငျတတှေ….အဲဒါကိုပွော တာပေါ့.သူတပါး ကိုကတြော့သခေငျြသေ.ဆိုးခငျြဆိုး.ငါသကျဆိုးရှညျ ဖို့ဘဲလိုတယျ ဆိုတဲ့လူစားမြိူးတှဘေဲ…
ကမ်ဘာအလယျ စောကျရှကျပွပွေောလိုကျ တာကတော့ဒေါသကိုနိူးဆှလိုကျ သလိုပါဘဲ.ကိုယျပွောတဲ့စကားလကျခံမလားဆို တာတောငျ.မသိကွတဲ့အာဏာရှငျတှေ.တောငျးပနျ တာတောငျ ကလိနျကကဈြကကွလိုကျရ မှ….
လူတကာနားထဲ ရီစရာသှားပေး သလိုဖွဈနပေါ့ဗြာ….ရိုးသားတဲ့ကမ်ဘာပျေါကပထမဆုံးနိူငျငံဆိုပါလား……
ထရမျ့ကတော့ မငျးပွောတဲ့စကားတှကေ ငါကိုဘဲ မရိုးသားတဲ့နိူငျငံ လိုလိုစောငျးကာ အျောနတောလားဟ ဆိုပီးပိုလို့ဒေါသနိူးဆှပေးလိုကျတာအတူတူပါဘဲ…. ခုတော့အခြိနျနှောငျးခဲ့ ပီ ဆိုပါတော့.ရပျတညျနိူငျရေး တရုတျတဈပွညျလုံးပေးရငျတောငျကနြေပျကွမှာ မဟုတျဘူးအကွောငျးကိုသိ.ခံလာရအကွိမျကွိမျရှိခဲ့ကွပီဆိုတော့လေ…
ထိုငျဝမျ.ဂပြနျ.ဘယျတော့မပွနျတဲ့လူစားမြိူးတှေ.ယတိပွတျအဆုံးသတျဖို့ထိလာနကွေတာ.လငျးယုနျကွီးရဲ့သခငျထရမျ့ပွငျဆငျနတောလညျး.ဝကျဝကျကှဲစဈရေးကိုအငျအားတိုးထားတာ….စဈတဈလငျးပွေးဆငျးရမဲ့အခြိနျထိဝိုငျးရံပိတျဆို့ထားကွမှာပါ….ဘယျလောကျ ထိကွံ့ကွံခံပီးနိူငျငံထဲနနေိူငျမှာလဲ.အဖွေ ကိုသိပီးသားဖွဈတဲ့အတှကျခုတော့ တရုတျနဂါးဖှတျကြားအဆငျ့ထိဖွဈနပေီ….
အပွငျကို ထှကျမရ.အငတျဘေးကွုံနရေတဲ့ပွညျသူ.ဘယျထိ မဆူဘဲနနေိူငျမလဲဘယျနလေ့ာ တိုကျမလဲ.ဘယျနလေ့ာခမြလဲ ဆိုပီး.ကွောကျနရေတဲ့.ဘဝကိုခံစားသိရှိကွပီ မဟုတျလား… သူတပါးကိုမတရားလုပျအနိူငျကငျြ့ဘိုကတြဲ့လူမှနျသမြှလောကတရားကွီးကကွညျ့မနပေါဘူး..အတုနျ့အပွနျပိုခကျထနျစှာလာစမွဲဆိုတာသိကွတော့ပေါ့…
လေးဘကျလေးတနျဝိုငျးရံထားတဲ့ စဈမဟာ.အငျအား တိုးလာ တာမွငျတော့ကွောကျပါပီ လို့မပွောရုံတဈမယျသိက်ခာလေး ဆယျနရေတယျ..ပွောလာပွနျတော့ တဈလှဲ.ဒေါသပေးနသေလားမှတျရတယျ..(ဟုတျပါ့)နားထောငျရတဲ့ သူမှနျသမြှဒေါသထကုနျကွတာ ဘဲလေ…
အငျးလေ.ကမ်ဘာကွီးလညျးငွိမျးခမျြး ခငျြပီထငျပါ ရဲ့.မတရားမူ့ကို ဖယျထုတျတဖွညျးဖွညျးသုတျသငျလာတာ သတိမထားမိလို့နပေါ လိမျ့မယျ ။ရှတေို့းမရနောကျ ဆုတျမရ.အခကျ တှနေ့ကွေ.အခြိနျမှီခငျပွုပွငျ ရခဲ့တဲ့အရာတှဆေိုပါတော့.ခုတော့လှနျလသေညျ့ အမှားနောငျတ.တရားဘဲရှိတော့တယျ
မကွာခငျနဝေငျတော့ မညျ.မဟာတံတိုငျးကွီးလညျးပွိုကမြွခေရတော့ မညျ….အားသှနျခှနျစိုကျတဈခကျြ မိုကျတာနှငျ့လညျးဗုံးမိုးတှရှောခြ.ဇတျသိမျး မလှဖွဈတော့မညျ….သံဝဂေတရား ဆုတျ ကိုငျထားကွပတေော့ ..နောငျလာနောကျသားပွော စကားတောငျကနျြပါ့မလား..ထရမျ့ကွီးကတော့ ကမ်ဘာသမိုငျး.ဖတျစာတိုငျးမှာ ပါလာကောငျး ပါရဲ့….
အဲဒါဘာလဲဆိုတော့.အာဏာရှိစဉျလူလိုမမွငျခဲ့တဲ့အကြိူးတရားခံစားကွရတာဘဲလေ…ခဈြခွငျးမတ်ေတာ. သနားငဲ့ညှာစိတျ ဆိုတာလူတိုငျးမှာသာရှိကွရငျ ဘယျစဈပှဲမှဖွဈလာစရာ အကွောငျး မရှိပါဘူး..
မတရားမူ့ကို မတုနျ့ပွနျ.သညျးခံနိူငျတဲ့ အတိုငျးအတာထိတော့ခံနခေဲ့ကွသေးတာ ဘဲ..ခုကတော့.အနိစ်စသဘော.ကိစ်စလြှောတော့မယျ ဆိုပါတော့….လောဘ.အတ်တ.မာန. ဒေါသတရားဖုံးလှမျးသှား ခဲ့ရငျ.အမှနျမမွငျပွုပွငျလို့မရတဲ့အကွောငျးတရားပိုလို့မြားပွားလာတာအမှနျပါလေ..
တဈခြိနျက မဟာတံတိုငျးကွီး.ခုတော့ပွိုဆငျး.မွတေလငျးပျေါရောကျခါနီးပီပေါ့မကွာမှီ.အတောငျပံမြား စှာ.လငျးယုနျကွီးဟာ ပြံသနျးပွပါ လိမျ့မယျဆိုတာ ကို မယုံမရှိလနှေငျ့…
ဂျပန်စစ် လေယာဉ်များ က ကြားဖြတ် ဟန့်တားမှုများပြုလုပ် ခဲ့ရတဲ့ တရုတ် ရဲ့ H-6K ဗုံးကြဲလေယာဉ် ဆိုတာ
တရုတ် ကို ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်နေ သော အမျိုးသမီး
ကိုရိုနာ COVID -19 ကူးစက်ခံရသူ ဦးရေ ထိုးကျသွား သဖြင့် ဝူဟန်ရှိ ယာယီဆေးရုံ (၁၁) ခုကို ပိတ်သိမ်း